विकास, आर्थिक सामाजिक र अन्य क्षेत्रको क्षेत्रमा कार्यहरू को गाउँमा, राम्रो र समसामयिक कार्यान्वयन सबै प्रणाली को सामान्य कामकाज को मेयर नियन्त्रण बिना असम्भव छ। तर मतदाता कसरी यो मानिसको कामको गुणस्तर आकलन गर्न सक्छन्? अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा र शक्ति, यस लेखमा छलफल गरिनेछ जो संग।
शहर को मेयर: अर्थ
को 06.10.2003 संविधान वर्षमा enshrined गाउँमा उच्चतम कार्यालय धारण र संघीय व्यवस्था अन्तर्गत शक्ति जो एक व्यक्ति, - शहर को टाउको। यो पोस्ट को लागि अर्को नाम - यो नगरपालिका को मेयर वा टाउको।
शहर प्रशासन को टाउको समस्या समाधान र स्थानीय संघर्ष सामना गर्न योग्य छ।
यसलाई विभिन्न देशहरूमा यो स्थिति यसको आफ्नै तरिकामा भनिन्छ कि विचारणीय छ। Kmet र स्कटल्याण्ड मा - - उदाहरणका लागि, पोल्याण्ड मेयर साधारण Burmistr, बुल्गेरियाली भनिन्छ प्रभु प्रोभोस्ट, आदि ...
मेयर लागि आवश्यकताहरू
अनुसार रूसी व्यवस्था संग, हरेक नागरिक शहर को टाउको रूपमा स्थिति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण पोस्ट लागि योग्य, हाम्रो देश को एक निवासी आवश्यक रूसी नागरिकता हुनुपर्छ, कि राज्य मा दर्ता छ। त्यहाँ एक अवस्था छ - गाउँमा को मेयर हासिल गर्न जो छ 21 वर्ष एक व्यक्ति हुन सक्दैन।
को unspoken नियमहरूको एक जसको पक्षमा र निर्णय गरिनेछ र कानून को विभिन्न टुक्रा मा मान्छे, को भरोसा लागि आफ्नो संभावना बढ्छ जो उम्मेदवार, को राम्रो प्रतिष्ठा छ। शहर र भविष्य टाउको छैन prosecuted गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा impeccable प्रतिष्ठा बुझाउँछ।
मेयर को शक्तिहरु
मेयर विविध प्रबंधकीय कार्य गर्दछ। उदाहरणका लागि, शहर को टाउको विभिन्न कानुनी प्रेरित र नियमहरु को ग्रहण गर्न योगदान पुग्छ। उहाँले पनि क्षेत्रीय सरकारहरू, विधायिकाहरुलाई र अन्य व्यापार सभाहरूमा संग सभाहरूमा उहाँको नियन्त्रण गाउँमा एक प्रतिनिधि हो। मेयर अनुमोदन र को बोर्ड द्वारा अपनाए विभिन्न कागजातहरू साइन इन गर्न सही छ को नगरपालिका को प्रतिनिधि गठन। यसको शक्ति को रूपरेखा मा प्रशासन को टाउको पनि जो आदेश र नियमहरू समावेश नियमहरु, हुन सक्छ।
वर्तमान स्थिति मेयर जनता प्रतिनिधि को परिषद जवाफदेही हुन obliges। यो विधान शरीर को न्याय को नगरपालिका विभिन्न विकास कार्यक्रम को मेयर परियोजनाहरू छ, र स्थानीय कर को राशि संशोधन गर्न प्रस्ताव छ।
मेयर खारेज वा आफ्नो प्रतिनिधि, शहर प्रशासन को टाउको लेना विवेकमा छ। शक्ति मेयर को दायरा र स्थापना, reorganization र नगरपालिका संस्थाहरु को उन्मूलन मा आदेश तयारी समावेश छ।
शहर को टाउको अभिनय धेरै विविध छ, र यो गाउँमा को सबै विभाग नियन्त्रण किनभने, उहाँले आफ्नो काम निरीक्षण गर्ने अधिकार छ।
को मेयर को चुनाव अनुसार रूसी व्यवस्था संग मा नगरपालिका को विधान, अनुसार, गरे। यो प्रक्रिया दुई भन्दा साधारण प्रकार हो।
पहिलो प्रकार - बराबर suffrage आधारमा एक गोप्य मतपत्र। यो आवश्यक उमेर पुगेको नगर्ने ती बाहेक, शहर को सबै बासिन्दा लागि खुला छ। दोस्रो प्रकार - स्थानीय प्रशासन सदस्यहरू र नगरपालिका अन्य अभिशासित शरीर बीचमा एक मत। यो बाद भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ चुनाव को प्रकार जहाँ प्रशासन र प्रतिनिधि शरीर टाउको को कार्य बीच सीमाहरु पकड कुनै आवश्यकता छैन त्यहाँ छ, ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्य रूप विशेषता छ।
प्राप्त वृद्धि लोकप्रियता सिस्टम जसमा मेयर - केवल figurehead, कुनै वास्तविक शक्ति। यो अवस्था मा, नगरपालिका विषयमा निर्णय को ग्रहण प्रशासन को टाउको, साथै संलग्न एक प्रतिनिधि शरीर।
शहर प्रबन्धक र मेयर को कार्य बीच फरक
शहर को टाउको द्वारा प्रदर्शन गर्दै छन् के कार्यहरु मा, माथि वर्णन गरिएको थियो। अब शहर प्रबन्धक बारेमा। रूस मा, यो पोस्ट अहिलेसम्म व्यापक छ। धेरै शहर जो लागि चुनाव यो स्थिति को लागि व्यक्ति आयोजित छन् कुनै स्पष्ट परिभाषित मापदण्ड हो।
शहर प्रबन्धक - व्यावसायिक प्रबन्धक, शहर प्रशासन बसालेको कार्यहरू बाहिर वहन। आफ्नो लक्ष्य - को तोडफोड जीवन गुणस्तर सुधार गर्न रूपमा चाँडै र कुशलतापूर्वक काम र अर्थव्यवस्था को राम्रो र नगरपालिका को अर्थव्यवस्था लागि सबै गर्न, dilapidated आवास को, सडक मर्मत अस्पताल, Kindergartens, आदि को निर्माण को लागि परियोजनाहरूको विकास ...
क्षेत्रीय सार्वजनिक च्याम्बर को chairmen को एक आवश्यक सुधार को कमी को प्रशासनिक उपकरण मा शहर प्रबन्धक को पोस्ट को परिचय मा कठिनाई देख्नुहुन्छ। स्थानीय, राज्य र संघीय: त्यसैले, यो सरकार विभिन्न स्तर बीच शक्ति मिलाए योजना छ। को मेयर, शहर परिषद र शहर प्रबन्धक को जिम्मेवारी अनुमति हुनेछ तेर्सो सुधार पनि भयो। यी सबै परिवर्तनहरू पछि मात्र उपकरण मा स्थान को सम्भव परिचय हुनेछ नगरपालिका व्यवस्थापन शिक्षा।
मेयर को शक्तिहरु को समापन
ढिलो होस् वा पछि, अन्तिम म्याद जो भित्र व्यक्ति मेयर को स्थिति आयोजित। यो पोस्ट शहर को एक नयाँ टाउको चयन गर्दा आफ्नो म्यान्डेट समाप्त गरिनेछ। तथापि, निम्न अवस्थामा सम्भव प्रारम्भिक समापन।
पहिलो, मेयर उहाँले निर्वाचित थियो जसको लागि शब्द को समाप्ति अघि आफ्नै अनुरोध मा राजीनामा सक्छ। दोश्रो, अदालत लगियो, शहर को अभिनय टाउको को राजीनामा मा निर्णय आधिकारिक अक्षम, आंशिक स्वास्थ्य कारण, सक्षम हराइरहेको वा मृत रूपमा मान्यता छ भने।
तेस्रो, मेयर को स्थिति कुनै पनि अन्य मा रूसी संघ नागरिकता परिवर्तन नमिल्ने हो, र स्थायी निवास लागि अर्को देश कदम संग।
वर्तमान स्थिति सैन्य वा वैकल्पिक को नगरपालिका को टाउको मुक्त छैन नागरिक सेवा, त्यसैले यसलाई उदाहरणका लागि, यो प्राप्त घटनाको बर्खास्त गरिनेछ, को भर्ती कार्यालय देखि एक अदालत को बुलावा।
शब्द "मेयर" को अंग्रेजी भाषा देखि उधारो र "मास्टर" अर्थ छ। तथापि, रूसी साम्राज्य मा शहर को टाउको रूपमा फरक भनिन्थ्यो। सम्झैताको पहिलो व्यक्ति मेयर भनिन्छ र तीन वर्षसम्म निर्वाचित। यो पोस्ट को XVIII सताब्दी क्याथरीन द्वितीय को दोस्रो आधा मा स्थापित भएको थियो।
Naginskiy Grigoriy Mihaylovich: जीवनी र क्यारियर
के शब्द "annexation" गर्छ? चेकोस्लोभाकिया annexation। Annexation - यो ....
Georgia र अब्खाजिया: द्वन्द्व कारण
सीरीज "Kadetstvo"। अभिनेताहरू र भूमिकाहरू। दस वर्ष पछि।
मैक्सिम गोर्की, "आमा": एक सारांश। उपन्यास गोर्की गरेको "आमा" को विश्लेषण
Erythema - चासो को लागि एक कारण?
चिकित्सा 'MabThera'। प्रयोगको लागि निर्देशन
पातलो endometrium: कारण र नैदानिक पूर्वानुमान
को गोडा को Synovitis: उपचार कारण निर्भर
गैर-नाकाबली र न्युनिकल एन्जिजिक्सिक्स: कार्य र आवेदनको तंत्र